Kuzadzikiswa sevhisi Agent | China Kuzadzikiswa sevhisi Kusvota & Mutengesi
Sarudzo yedu nekutakura zvinhu zvakabatsira sei vatengi? Mutengi akati: Ndiri kushamisika kwazvo kuti pasuru yechigadzirwa yakanaka kwazvo, chigadzirwa chacho chakasimba, uye mutengi anogutsikana. —— yeRoma Tinopa chakazara bespoke pick uye kurongedza kuzadzikisa sevhisi yakanangana neako bhizinesi rako zvido! 99.6% kunhonga kwakaringana chiyero Zvakanyatsobatanidzwa newebhusaiti yako uye kutengesa mapuratifomu Magetsi ekugadzirisa mashegi anovandudza Saizvozvowo sevhisi sevhisi.
Ndeapi masevhisi ekuzadzikisa? Sevhisi yekuzadzisa ndeye yechitatu-bato imba yekuchengetera iyo inogadzirira uye inotumira maodha ako kwauri. Inoita izvi kubva munzvimbo yayo yekuzadzikisa. Ecommerce kuzadzikisa masevhisi akakosha kumabhizinesi ayo asingade kubata nekutakura kana kunge akura zviripo zvekuchengetedza dzimba kusvika padanho ravanotadza kutumira maodha ivo pachavo. Kuzadzikiswa otomatiki 1.Sunson API inogonesa iwe kubatanidza mawebhusaiti ako uye kuwiriranisa data. 2.Kubatanidzwa neyedu ...
Zvinoshamisa zviri nyore Shopify kuzadzikiswa kwekuzadzikiswa ne Sunsonexpress. Isu tinobatsira Shopify vatengesi kuzadzikisa maodha nekukurumidza uye mutengo-mushe sezvinobvira kusangana nevatengi vavo zvavanotarisira. Shopify inosanganisirwa inosanganisirwa nesoftware yedu kuti ishandise kuzadzisa uye manejimendi manejimendi, ichikuita iwe kuti utarise pakutengesa nekukudza bhizinesi rako - usinetseke Kurongeka kuzadzikiswa. Nyore kusanganisa Batanidza yako Shopify chitoro kune Sunsonexpress kuzadzikisa software mumatanho mashoma mashoma. Batanidza chitoro chako ...
Shambadza Wako neYedu Value-yakawedzera Serive! Kuvandudza kweBrand 1. Kuwedzera kushambadzira kuisa kuti ufadze uye chengeta vatengi vako. 2. Kuisazve zvigadzirwa zvako mumabhokisi akagadzirwa, mune yako yaunofarira maitiro. 3. Kitting uye kuungana kunatsiridza yako yekupa cheni uye kurerutsa nzira yekugovera. 4. Lableling inonetsa asi yakakosha maitiro saka tinozvitorera iwe, uye tinoisa zvinyorwa zvakakodzera kuti tione kuoneka kwezvigadzirwa zvako. Supply Chain Service Mune ino inokurumidza kufamba ma ...
Ipa basa rakachengetedzeka, rakachengeteka uye remahara rekuchengetera muChina Tine 3000 + mativi emamirimita ekuchengetera muShenzhen, Govera kushandiswa kwemahara kwemwedzi mitatu kwevatengi vatsva, uyezve mahara mushure memwedzi mitatu uchibva pane iwe unenge uine 60Pcs maodha ekutumira pamwedzi, 3000m² imba yekuchengetera. inogona kusangana neyako inoverengeka yekushaiwa kudiwa, nekukurumidza kugadzirisa odha yako uye kugadzirira kutumira. Isu China Warehouse yekuchengetedza stock yako yakachengeteka, yakazara ne24 / 7 chengetedzo yekutarisa uye inishuwarenzi. Nhanho1: Warehouse Recei ...
Zvakanakira kudonhedza Kudonhedza imhando huru yebhizimusi yevanoshuvira vanamuzvinabhizimusi kutanga nekuti inowanikwa. Ne kudonhedza, iwe unogona kukurumidza kuyedza akasiyana bhizinesi mazano ane mashoma kuderera, izvo zvinokutendera iwe kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekusarudza uye kushambadzira mune-zvinoda zvigadzirwa. Heano mamwe ezvimwe zvikonzero nei kudonhedza iri yakakurumbira modhi. 1. Mari shoma inodiwa Zvichida chikuru mukana wekudonhedza ndechekuti zvinokwanisika kuvhura ecommerce chitoro wit ...